10 hp yemagetsi mota mutengo, 10 hp yemagetsi mota yekutengesa
10 hp magetsi emagetsi mutengesi wekutengesa nemutengo wepamusoro
10 HP General Chinangwa
Industrial Magetsi Motors
10 hp mota yemagetsi, 10 hp mota yemagetsi 12v, 5 hp mota yemagetsi, 10 hp mota yemagetsi yemhepo compressor, 10 hp yemagetsi shaft saizi, 10 hp mota yemagetsi torque, 10 hp mota yemagetsi 3 chikamu amp dhiza. Semutengesi wepasi rese wemagetsi emagetsi, isu tinopa dzakasiyana mhando dze AC Motors uye DC Motors.
Yakakwira Torque 10 hp mota yemagetsi, 10 hp mota yemagetsi dc, Yakazara mutserendende we460 volts, 230 volts uye 115 volts 10 hp magetsi emagetsi dhizaini, 10 hp mota yemagetsi yechikepe, 10 hp imwechete chikamu mota amps General Chinangwa Industrial Electric mota. , 10 hp mota yemagetsi 12v, isu tine 10 hp yemagetsi mota amp chiyero chakafanana neiyo 5 hp mota yemagetsi, 10 hp yemagetsi mota imwechete chikamu, 10 hp yemagetsi mota uremu ndeye 231 lbs. ye4 pole mhando. 10 hp mota yemagetsi yemhepo compressor, 10 hp mota yemagetsi iri kutengeswa, 10 hp mota yemagetsi torque yekukwira kutanga. 10 hp yemagetsi mota shaft saizi iri 38mm dhayamita uye 80mm kureba. Kune iyo 10 hp yemagetsi mota 3 chikamu amp dhizaini, isu tinozoitumira iyo nemota pamwechete.
mutengo weedu 10 hp mota yemagetsi iri kukwikwidza uye mutengo wemutengo wekutenga mota-inoshanda magetsi. Isu tinokubatsira iwe kana uchisarudza chinotsiva 10 hp mota yemagetsi kune yako yekufambisa, mapampu kana zvimwe zvigadzirwa. 10 hp mota yemagetsi 3 chikamu chiri kutengeswa, Kuziva kuti ingani 10 gp mota yemagetsi inodhura, ndapota taura nesu ipapo.
10 hp magetsi emagetsi shaft size
10 hp yemagetsi mota amp rating
10 hp yemagetsi mota yemhepo compressor
10 hp yemagetsi chikepe chechikepe
10 hp yemagetsi mota 12v
10 hp yemagetsi mota yekutengesa
Matatu Phase Premium Anoshanda 10 hp yemagetsi mota 3 chikamu simba, uye zvakare se10 hp yemagetsi mota imwechete chikamu mhando mhando mugadziri. Mimwe mienzaniso ye10hp yemagetsi mota dc iyo yatinogona kupa zvakare.
Kunge 2 hp yemagetsi mota 1725 rpm imwechete chikamu, 3 hp mota yemagetsi 1725 rpm chikamu chimwe, 1.5 hp mota yemagetsi chikamu chimwe chete chavanogona kushandiswa se3 hp yemagetsi mota epurazi basa.
Yedu yakachipa pane abb 10 hp mota mutengo, yakavharwa zvachose 10 hp mota yemagetsi, 1000rm, 1750rpm, 3600 rpm etc. Kuti uwane 10 hp 3 chikamu mota mota muChina, gamuchirai kubvunza isu.
Kugamuchirwa kuInquiry Us chero nguva.